नारायणगढ–मुग्लिङ सडक फेरि अवरुद्ध
चितवन। नारायणगढ—मुग्लिन सडक खण्डको टोपे खोलामा पुनः पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको छ । इच्छाकामना गाउँपालिका–६ टोपेखोलामा बिहीवार बिहान ५ बजे पहिरो खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले बताएको छ । पटक–पटकको पहिरोका कारण नारायणगढ–मुग्लिङ सडक अवरुद्ध हुँदै आएको छ । यसबाट हजारौं यात्रु समस्यामा
हुम्लामा बच्चा जन्माउन डेढ लाख खर्च !
दाने बोहरा/हुम्ला । कर्णालीको विकट हुम्ला जिल्लाबाट २ महिना अवधिमा सात जना गर्भवती महिलाको उद्धार गरिएको छ । जिल्लामा सुविधा सम्पन्न प्रसुति केन्द्र नहुँदा गर्ववती महिला समस्या झेल्दै आएका छन् । पछिल्लो जेठ र असारमा मात्र जिल्लाको विकट स्थानबाट ७ जना गर्ववती महिलाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ । ३/४
अनशनरत डा.गोविन्द केसीको समर्थनमा माइतीघर मण्डलामा प्रर्दशन
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा नागरिक अगुवा, मानवअधिकारवादी राजनीतिक दलका नेता र सञ्चारकर्मी लगायतले आज (शनिबार) माइतीघर मण्डलामा प्रर्दशन गर्ने भएका छन् । चिकित्सा क्षेत्र सुधारकोे माग राख्दै १५ दिनदेखि जुम्लामा अनशनरत डा. केसीका मागप्रति सरकार अनुदार रहेको भन्दै दवावका लागि वृहत प्रदर्शन
सिक्किममा यसरी मनाइयो भानु जयन्ती
भारतको पूर्वाेत्तर राज्य सिक्किममा २०५ औँ भानुजयन्ती धुमधामका साथ मनाईएको छ । सिक्किम र दार्जिलिङमा भानुजयन्तीको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना हुने गरेका छन् । सिक्किम राज्यमा पढाईने नेपाली भाषाको पाठ्यक्रममै ‘आदिकवि भानुभक्त’ को जीवनी उल्लेख गरिएको छ । सिक्किममा बसोबास गर्ने सबैजाति भाषाले
तत्काल वार्ता गर्न तयार छौंः डा.गोविन्द केसी
काठमाडौं । जुम्लामा आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीले आफू कुनै पनि बेला वार्ताका लागि तयार रहेको बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै १५ औं पटक अनशनमा बसिरहेका डा. केसीले सरकार मागप्रति उदासिन रहेको भन्दै आफू जुनसुकै बेला वार्ताका लागि तयार रहेको बताएका छन् । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले
शिशु तस्करीमा मदर टेरेसा च्यारिटी
भारतको झारखण्ड राज्य पुलिसले मदर टेरेसा च्यारिटी अफ ईन्डियाका दुई जना ननलाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरुमाथि चारवटा नवजात शिशु तस्करी गरेको आरोप छ । प्रहरी अधिकृत श्यामानन्द मण्डलले भने, ‘यिनीहरुमाथि झारखण्डबाट तीन र उत्तर प्रदेशबाट एक नवजात शिशु बेचेको आरोप छ । बाँकी कुरा अनुसन्धानपछि सार्वजनिक गर्नेछौँ
सार्वजनिक स्थानमा प्रदर्शन गर्न रोक नलगाऊ : सर्वोच्च
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डलासहित सार्वजनिक स्थानमा प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यस विषयमा छलफलका लागि सरकार र रिट दायरकर्ता दुबै पक्षलाई असार २९ गते बोलाएइएको छ । स्थानीय प्रशासनले विरोध प्रदर्शन गर्ने ठाउँ तोक्दै माइतीघर मण्डला लगायतका ठाउँमा
कैलाश मानरोवरमा १५ सय भारतीय तीर्थयात्री अलपत्र
काठमाडौं । भारी वर्षाका कारण कैलाश मानसरोवरको तीर्थयात्रामा गएका १५ सयभन्दा बढी भारतीय नागरिक अलपत्र छन् । भारतीय दूतावासले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरि उनीहरू उद्धारका लागि सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । मौसमी प्रतिकूलताका कारण हुम्लाको सिमीकोटमा ५२५, हिल्सामा ५५० र तिब्बतीय क्षेत्रमा ५०० भन्दा बढी
सामाजिक असमानता घटाउन विवेकशील पार्टीको‘समता संवाद श्रृंखला’ अभियान
काठमाडौं । समाजमा वढ्दो असमानता घटाउन विवेकशील साझा पार्टीले नयाँ अभियान ‘समता संवाद श्रृखला’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । पार्टीले समाजमा वढ्दो अन्याय,विदेभ र कूरिति न्यूनिकरणका गर्ने उद्देश्यले अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम थालेको हो । संवाद कार्यक्रम मानवअधिकार,सामाजिक न्याय,समावेशिता, तथा मानव मर्यादालाई
मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानूमान, कहाँ–कहाँ हुँदैछ भारी वर्षा
काठमाडौं । बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आज चुरे र महाभारतबाट बहने नदी आसपास रहने बासिन्दाले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । आइतबार (आज) देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेकाले चुरे र महाभारतबाट बहने लगायतका नदी आसपासमा उच्च सतर्कता अपनाउन भनेको हो । गोरखा, धादिङ, लमजुङ र कास्कीको केही
वडा अध्यक्षको प्रहारबाट ४ जना घाईते
रौतहट/स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित बौधिमाई नगरपालिका वडा नं ७ का अध्यक्षले धारिलो हतियार प्रहार गरि एकै परिवारका ४ जनालाई घाईते बनाएका छन् । सडक विस्तारका क्रममा विवाद हुँदा वडाअध्यक्ष विजय कुशवाह स्थानीय परिवारमाथि जाइ लागेका हुन् । सडक विस्तार गर्नको लागि आफ्नो विपक्षीको
बौद्ध स्तुप जाने सडक धान रोप्ने खेत बन्यो
काठमाडौँ, असार ४ गते । असारको महिना चुच्चेपाटी–बौद्ध–जोरपाटी सडक पेटीबाट हिँड्दा लाग्छ धान रोप्न तयार पारिएको यो एउटा लामो गरो हो । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बौद्धनाथ स्तुप क्षेत्रमा मासिक हजारौँ विदेशी पर्यटक आउँछन् । सम्पदा अघिको सडकको यो अवस्था हुँदा पर्यटकमार्फत विश्वव्यापी रुपमा के सन्देश
दूधमा यूरिया र नूनसमेत मिसाउने गरेको भेटियो
काठमाडौ । खाने दूधमा कपडा धुने सोडा र साबुनमा प्रयोग हुने रसायन समेत मिसाइने गरेको पाइएको छ । गर्मीयाममा दूध फाट्नबाट जोगाउन दूध संकलन गर्ने सहकारीका व्यवस्थापक तथा ठेकेदारले यस्ता हानिकारक वस्तु मिसाउने गरेको पाइएको हो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३० वटा दुग्ध प्रशोधन उद्योग छन् । यीमध्ये २५ वटा
दृष्टिविहीनहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने, ‘कि बाँच्ने आधार देऊ कि मारिदेऊ’
काठमाडौं । नेपाल दृष्टिविहीन अपाङ्ग जागरण संघर्ष समितिले सरकारले आफूलाई उपेक्षा गरेको भन्दै तत्काल शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूहरुलाई ढाँटेको दृष्टिविहीनहरूको आरोप छ । आफ्नो योग्यता र क्षमताको आधारमा जीवन जिउन खोज्दापनि त्यसमा
सुनसरीमा १२ घन्टाभित्र एकै खोरका ४ सय चल्ला मरे, बर्डफ्लुको आशंका
इनरुवा– सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–६ मा एउटै खोरमा रहेका कुखुराका करिब ४ सय चल्ला मरेका छन्। स्थानीयवासी उपेन्द्र यादवले सोमबार राति चल्ला ल्याएको र मंगलबार बिहान एक–दुई गर्दागर्दै भकाभक चल्लाको मृत्यु भएको स्थानीय पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पप्पु पाठकले जानकारी दिए। यादवले कैलाशपति ह्याचरी
स्वच्छ वातावरण सबैको दायित्वः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा द्रूतगतिका साथ अग्रसर हुँदा वातावरण प्रदूषण एउटा साझा चुनौतीका रुपमा देखा पर्न सक्ने बताएका छन् । विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा मंगलबार सन्देश जारी गर्दै वातावरण संरक्षणमा हामी सबैले उत्तिकै जिम्मेवार भएर सोच्न र तदनुकूल
सामाजिक सेवामा फरक परिचय बनाउँदै समाज कल्याण गतिविधि नेपाल
काठमाडौँ । समाज कल्याण गतिविधि नेपालका अध्यक्ष गणेश महतराले युवा जनशक्तिलाई विदेश जानबाट रोक्नुपर्ने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा विकास विज्ञ भाइराजा पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यमा शनिबार ‘समाज सेवामा युवाशक्तिको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा बोल्दै अध्यक्ष महतराले उक्त कुरा बताएका
अपहरणकर्ता पतिलाई जेलमुक्त गरेकोमा सविनाको आपत्ति
काठमाडौं । नेपालगञ्जकी सविना कार्कीले आफ्नो अपहरणमा सलंग्न अपराधीहरुलाई जेलमुक्त गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छिन् । बाँके नेपालगञ्ज स्थायी घर भएका आफ्नै श्रीमान नरेन्द्र शर्माले आफूलाई ८ महिनासम्म अपहरण गरेको र यातना दिएको भन्दै अपराधमा सलंग्न मुख्य अभियुक्तले अदालतबाट सफाई पाएकोमा कार्कीले आपत्ति
डडेल्धुरामा चट्याङ लागेर १३ जना घाइते
डडेल्धुरा — डडेल्धुराको भित्री मधेश क्षेत्रमा चट्याङ लागेर १३ जना घाइते भएका छन् । बिहीबार बेलुका पानी र हावाहुरीसँगै आएको चट्याङले परशुराम नगरपालिका–६ छेलामा ८ जना र सोही नपा ७ सादनीमा ५ जना घाइते भएकाे प्रहरीले जनाएको छ । परशुराम बिहीबार बेलुका दुई घरमा परेको चट्याङले उनीहरु घाइते भएका
हवाई भाडादर वृद्धिले ढाँडभाँच्यो : हुम्ली
हुम्ला । हुम्लावासी फेरि महङ्गो हवाई भाडा तिर्न बाध्य भएका छन् । गत बैशाख २६ गते संस्कृृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालयले २८ प्रतिशत भाडा बृृद्धि गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेसँगै सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुुम्लाका वासिन्दालाई आवत–जावतमा समस्या पर्ने भएको हो । हाल नेपालगञ्जबाट सिमकोटका लागि
साथीहरूले हत्या गर्न खोजेःश्रीनव
काठमाडौं । चितवनको खैरेनी नगपालिका– ३ मा रहेको सैनिक आवासीय महाविद्यालयमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत विद्यार्थी श्रीनव लामिछानेमाथि हत्या गर्ने प्रयास भएको भन्दै पीडित परिवारले सत्य तथ्य जाँचबुझका लागि अपील गरेका छन् । आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर गत बैशाख २८ गते लामिछानेलाई राति ३ बजे सोही स्कुलमा
वर्षेनी किन देखाइन्छ रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो ?
काठमाडौँ । वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाइएको छ । आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा गुठी संस्थान ललितपुरका प्रतिनिधिले भोटो देखाएका हुन् । भोटो अवलोकन गर्न राष्ट्रपति भण्डारीसँगै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कायममुकायम प्रधानन्यायाधिश
मोदी जनकपुर आउँदै,प्रदेश २ मा सार्वजनिक विदा
काठमाडौँ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आज जनकपुर आउँदैछन् । मोदीको जनकपुरधाम भ्रमणलाई दृष्टिगत गरी प्रदेश २ सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको छ । यस्तो छ मोदीको रुटिङ जनकपुरबाट काठमाडौं हुँदै मुक्तिनाथ गएर मोदी शनिबार दिउँसो ४ बजे स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ । मोदी पटनाबाट भारतीय वायुसेनाका
दुई बण्डल जस्तापाता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले तराईका धनुषा, महोत्तरी, सिरहालगायत जिल्लाका आँधीबेहरी पीडितलाई तत्काल आवासको व्यवस्था गर्न प्रतिपरिवार दुई बण्डल जस्तापाता उपलब्ध गराउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज साँझ बसेको बैठकले प्राकृतिक प्रकोप पीडितका लागि तत्काल आवास व्यवस्थापनका लागि दुई बण्डल जस्तापाता उपलब्ध
नाकाबन्दी गर्ने मोदीलाई सम्मान जरूरी छैन् : नागरिक समाज
काठमाडौँ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नागरिक समाजका अगुवाहरूले नागरिक अभिनन्दन नगर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र जनकपुर उपमहानगरपालिका मेयर लालकिशोर साहको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले २०७२ सालमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएर अन्तर्राष्ट्रिय
सरकारले हटाउँदैछ नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक र दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षलाई
अमरवाणी संवाददाता/काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई एकसाथ पदबाट बर्खास्त गर्ने तयारी गरिएको छ । राजभण्डारीको कमजोर कार्यक्षमता र झाको बढ्दो मनोमानीलाई ‘इस्यू’ बनाएर उनीहरुलाई
नमुना गाउँ बनाउने अभियानमा युएनआई नेपाल
अमरवाणी संवाददाता/बनेपा । युनियन नेटवर्क नेपाल समन्वय परिषद (युएनआई एनएलसि) काठमाडौंले काभ्रे जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिका १२ को तीनघरे ठुलागाउँको दनुवार बस्तीलाई नमुना गाउँका रुपमा विकास गर्दै लैजाने जानकारी दिएको छ । तीनघरे ठुलागाउँका १८ जना महिलाहरुलाई तीन महिने सिलाई कटाई तालिमको प्रमाणपत्र वितरण
सूचक र सतर्कक : खँदिला समाचारका विशिष्ट स्रोत
ध्रुवहरि अधिकारी/‘नाम नखुलाउने शर्तमा’ प्राप्त सूचना वा जानकारीलाई सामान्यत: प्रयोग नगर्ने समाचार संस्थाहरूको नीति हुने गर्छ । किनभने समाचार लेख्दा राम्ररी स्रोत खुलाएर लेखिए मात्र त्यसको विश्वसनीयता स्थापित हुन्छ; अर्थात् त्यस्तो खबरलाई मात्र पाठक समुदायले पत्याउँछन् । मैले पत्रकारिताको विद्यार्थी
‘धर्मगुरु’ ले आफैँलाई गोली हान्न लगाएको प्रहरीको दाबी
काठमाडौँ । एक महिनाअघि विराटनगरको एउटा धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका धर्मगुरु भनिने श्रीनिवास आचार्यले नै आफूलाई गोली हान्न लगाएको रहस्य अनुसन्धानका क्रममा खुलेको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। उक्त रहस्य खुलेपछि उनलाई प्रहरीले सोमवार काठमाण्डूबाट पक्राउ गरेको मोरङका प्रहरी उपरीक्षक अरुणकुमार
गुठीमा नारायणको छाँया ५ शाखा प्रमुख वर्षोदेखि कामू
अमरवाणी संवाददाता/काठमाडौं । गुठी संस्थानले शाखा प्रमुख नियुक्ती नगर्दा आधाभन्दा वढी शाखा कार्यालय वर्षोदेखि कायममूकायका भरमा चल्दै आएका छन् । देशभर गुठीका ९ ओटा शाखा कार्यालय मध्ये ५ ओटा वर्षोदेखि कामू वा निमित्त प्रमुखका भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । वर्षो कामूका भरमा चल्ने कार्यालयहरुमा
कुल पोष्ट : 387